खतरा बढेपछि लकडाउनमा ब्यापक परिवर्तन, अबको लकडाउनमा हुने छन यस्ता नियम ! यो समयमा हिड्न पनि पाइने छैन !
नेपालमा थप ४२६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरिका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा ४२६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए। यो सँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८ हजार २७४ पुगेको छ । नयाँ सङ्क्रमितमध्ये ३३८ पुरुष र ८८ महिला छन् ।
प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप २१६ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । तीमध्ये नौ महिला र २०७ पुरुष रहेका छन् । योसँगै निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या एक हजार ४०२ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा ४ हजार २ सय ३१ गरी शुक्रबारसम्म पीसीआर विधिबाट १ लाख ६१ हजार ७ सय ४९ जनाको परीक्षण भएको छ । यस्तै आरडीटी विधिबाट पछिल्लो २४ घन्टामा ४ हजार ३ सय ९९ गरी शुक्रबारसम्म २ लाख ४७ हजार ८ सय ७४ जनाको परीक्षण भएको प्रवक्ता डा गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एक लाख नौ हजार ४६१ जना क्वारेन्टिनमा र छ हजार ८५० जना आइसोलेशनमा रहेका छन् । मुलुकभर २२ प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गरिँदै आएको छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट हालसम्म २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने पछिल्लो २४ घण्टामा थप सङ्क्रमितको मृत्यु नभएको प्रवक्ता डा गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म देशका ७४ जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ ।
यसै क्रममा खतरा बढेको भन्दै सरकारले लकडाउनमा केहि नियम परिबर्तन गर्दै थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँड्डुलमा रोक लगाएको छ।
गृह मन्त्रालयले बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गर्दै अत्यावश्यक कामबाहेक आफू रहेको आवास वा कार्यालयबाट आवतजावत नगर्न भनेको छ। ‘आवतजावत गर्दा वा कार्यस्थलमा कार्यरत रहँदा न्यूनतम दुई मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने,गराउने र तोकिएको वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्दा वा कार्यस्थलमा कामकाज गर्दा सेवा प्रवाह एवं आवतजावत लगायतका कार्यमा ‍संलग्न रहने व्यक्तिहरूले अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने,स्यानिटाइजर साथमा राख्ने,’बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्डमा भनिएको छ,’मालसमान ढुवानी गर्ने कुनै पनि प्रकारको सवारी साधनहरूले चालक,सहचालकबाहेक अन्य कुनै पनि यात्रुहरूको ओसारपसार नगर्ने/नगराउने।’